Nhau - Chenguang biology inotsigira Xiaohekou chikoro chepuraimari kwemakore gumi nerimwe akateedzana
Musi waZvita 2, mubairo wekupa mubairo weChenguang Boka Rekudzidzisa shanduko yekuyedza yechiyero che xiaohedao chikoro chepuraimari chakaitwa zvine mutsindo. Chenguang biology yakapihwa 93600 yuan kune vatatu vepamusoro vadzidzisi ve xiaohehe epuraimari giredhi 1-6 mune yakabatana bvunzo ye 2019-2020 gore rekudzidza uye vahwina mibairo-vanopinda mumakwikwi akasiyana siyana. Vadzidzisi vanopfuura makumi mana vakapihwa. Iri ndiro gore regumi nerimwe mumutsara iyo Chenguang biology yakabhadhara chikoro cheXiaohe chepuraimari.
Han Zhihua, wechishanu giredhi rechishanu mudzidzisi wemasvomhu, akahwina iyo 7300 yuan mubairo panguva ino. Pachinzvimbo chevazhinji vadzidzisi muXiaohe primary school, akataura pamhemberero yekutenda Chenguang biology nemubairo. Akataura kuti achararama zvinoenderana nebasa rake mune ramangwana basa uye oedza nesimba rese kudzorera Chenguang biology uye Xiaohe chikoro chepuraimari nezvakanyanya kubudirira.
Kwemakore, Chenguang Biotechnology Group Co, Ltd. yanga ichiomerera pane pfungwa ye "vanhu uye bhizinesi co-kusimudzira", vakapfuma uye vachifunga nezve dzidzo, uye havana kukanganwa kuvandudzwa kwedzidzo yekumba vachiri kukura uye kusimba. Kubva 2009, kambani iyi yakashandisa imwe mari gore rega rega mukuvandudza dzimba dzekudzidzisa nemidziyo yevadzidzi mune zvimwe zvikoro zvepuraimari nesekondari, kupa mubayiro vadzidzisi vakanaka, kupa vadzidzi vakapusa varombo mukoreji yekuongorora bvunzo, nezvimwe. Muna 2015, "Chenguang kudzidza" hwakagadzwa muQuzhou No.1 yepakati chikoro kupa mubairo vadzidzi vakanaka avo vakabvumirwa ku "985 ″ University. Kwemakore gumi apfuura, Chenguang biology yakapa mari inopfuura mamirioni maviri yeyuan kuti ibatsire Xiaohe chikoro chepuraimari kugadzirisa mamiriro ekumhanya kuchikoro, kupa mubairo vadzidzisi vakanaka, kubatsira vanopfuura makumi mashanu vadzidzi vakagwinya vanoziva kurota kwavo kweYunivhesiti, uye vanopfuura makumi mashanu vadzidzi vakanakisa mu kukoreji yekupinda bvunzo yakunda iyo "Chenguang kudzidza", iyo yakahwina kurumbidzwa kwakakura kubva kunzanga.
Mukuvandudzwa kwenzira yeChenguang biology, inoshingairira kuita basa rezvemagariro uye inotora chikamu muzvirongwa zveveruzhinji. Iyo kambani yakapa mipiro mikuru mukutsigira kuvandudzwa kwehukama hweveruzhinji zviitiko, rubatsiro rwekudengenyeka kwenyika, kuvaka kwemadhorobha, zvifambiso nedzidzo, uye kurwisana nedambudziko mamiriro, iine huwandu hwekudyara hunopfuura mamirioni makumi maviri nematanhatu yuan.